Semalt: गुगल ज्ञान ग्राफ बुझ्दै र यो कसरी काम गर्दछ
तपाईंको वेब सामग्रीको गुगलको बुझाइको सुविधाका लागि, ज्ञानको ग्राफमा शीर्षकहरू कसरी प्रभाव पार्ने भनेर हामीले बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। Semalt उनको वेबसाइटका लागि समर्पित वेबसाइट हो जुन एसईओ सम्बन्धित सबै कुरा बुझ्नु हो। कम्पनीको रूपमा जुन दुबै वेब डिजाइन र वेब विकासमा केन्द्रित छ, हामी एसईओलाई वेबसाइटको प्रत्येक पक्षमा समाहित गर्दछौं। यो, अवश्य पनि, Google ज्ञान रेखाहरू को एक समझ समावेश छ।
ज्ञान ग्राफहरू के विशेष बनाउँछ?
ज्ञान ग्राफ बिना, यो खोज इञ्जिनका लागि गाह्रो हुनेछ, विशेष गरी Google, संस्थाका लागि संरचित डाटा प्रयोग गर्न। मार्कअपहरू र सिमेन्टिक डाटा, फलस्वरूप, विचार र अवधारणाहरू जडान गर्न मद्दत गर्दछ, तिनीहरूलाई सँधै संरचित डाटामा रूपान्तरण गर्न जुन हामी गुगलको ज्ञान ग्राफमा भर्न वा प्रभाव पार्न प्रयोग गर्न सक्दछौं।
एसईओ पेशेवर को रूप मा, हामी लाई ग्राफ मा यी शीर्षकहरु को प्रभाव पार्न सक्ने तरिका बुझ्न को लागी हाम्रो कर्तव्य हो, ताकि हामी गुगल को सामग्री को समझ मा उनीहरु लाई अर्थपूर्ण परिवर्तन गर्न को लागी प्रभाव पार्न सक्छ।
SEO पेशेवरको रूपमा, हामी बुझ्दछौं कि ग्राफको शीर्षकहरूमा कसरी प्रभाव पार्ने भन्ने बारे ग्राहकको सामग्रीको गुगलको बुझिमा अर्थपूर्ण परिवर्तनहरू।
गुगल ज्ञान ग्राफ के हो?
हामी ज्ञान रेखांकन डाटाबेस र एक विश्वकोश बीच एक प्रतिच्छेदन हो। विकासकर्ताहरूले ज्ञान ग्राफमा प्रत्येक लेखलाई एन्टिटी वा गुगलको ग्राहक-सम्बन्धी लेखहरूमा शीर्षकको रूपमा विषयलाई बुझाउँछ।
एकाइ पूर्ण रूपमा केहि पनि हुन सक्छ। धेरै जसो डाटाबेसको साथ योसँग यसको अनौंठो परिचयकर्ता हुन्छ, जुन तपाईं कहिलेकाँही गुगलका यूआरएलहरूमा देख्नुहुन्छ। यो यस्तो देखिन्छ: [किलोग्राम=/ g/११f0vfyswk & hl], प्यारामिटर नाम "किलोग्राम", तथापि, एकाइ प्रकारको आधारमा परिवर्तन गर्न सक्दछ।
सामान्यतया, एकाइको बारेमा त्यहाँ धेरै वक्तव्यहरू छन्:
शीर्षक वा नाम (जस्तै "जर्ज बुश")।
प्रकार वा प्रकारहरू (जस्तै "व्यक्ति")।
वर्णन (जस्तै "कुनै समय संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति थिए")।
छवि URL को सूची (सामान्यतया प्रयोग अधिकारसँग सम्बन्धित)।
विस्तृत विवरण (स्रोतको URL को साथ केही व्याख्यात्मक पाठ)।
गुगलले भनेका छन कि, जबकि माथिको सूचीमा भएका सूचनाहरू उनीहरूको खोज एपीआईमा सिधा उपलब्ध हुन सक्छन्, यो डाटा आन्तरिक रूपमा पर्याप्त रूपमा बढेको छ।
त्यसोभए माथिको उदाहरणमा, डाटाले बुशको जन्म र मृत्युको मिति पनि समावेश गर्न सक्दछ; यसले बार्बरा बुशसँग विवाह गरेको हुन सक्छ। यसले कार्यालयमा उनका केहि उपलब्धिहरू उल्लेख गर्न सक्छ।
सबै जानकारीको साथ, यो एक ज्ञानकोश लेखको तुलनामा कसरी धेरै भिन्नता छैन भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। यद्यपि भिन्नता यो छ किनकि सबै तथ्यहरूलाई "अफिसमा वर्षौं संख्या" जस्ता फाँटहरूमा वर्गीकृत गरिएको छ, मेशिनहरूले विषयहरूमा बिन्दु जोड्न सजिलो पाउँदछ। मेशिनहरु लाई पनि सजिलो जानकारी को लागी तुरून्त तुरून्त प्राप्त गर्न को लागी जब एक व्यक्ति एक अनुरोध बनाउँछ। उदाहरणको लागि, यदि तपाइँ जर्ज बुशसँग कोसँग विवाह गर्नुभयो भनेर खोज्नुभयो भने? तपाईंले यो हेर्नु पर्छ:
विश्वभरि धेरै ज्ञान रेखाहरू छन्, र गुगलको ज्ञान ग्राफ यी धेरै ग्राफहरू मध्ये एउटा हो। अन्य ज्ञान रेखिकाहरूमा विकिडाटा.org, dbpedia.com, र अधिक समावेश छ। वास्तवमा, अर्ध-संरचित डाटाको कुनै पनि प्रकारलाई ज्ञान ग्राफको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ त्यसैले आईएमडीबी वा ज्ञानकोश जस्ता डाटाबेसलाई ज्ञान ग्राफहरू भनेर चिनिन्छ।
सुरुमा, गुगलले अन्य डाटा सेटहरूबाट यसको ज्ञान ग्राफ बनायो, सीआईए तथ्य पुस्तक र विकिपेडिया सहित। हामीले यो हल्ला पनि सुनेका छौं कि गुगलको ज्ञान प्यानलले पनि यसको ज्ञान ग्राफको रूपमा काम गर्न सक्छ। यो जे भए पनि गलत छ र उपेक्षा गरिनु पर्छ। जबकि ज्ञान प्यानल कहिलेकाँही ग्राफ मा डाटा को एक उपसेट प्रतिनिधित्व, तिनीहरू एकै चीज होईन।
ज्ञान प्यानलले गुगलको ज्ञान ग्राफमा जडित डाटा वस्तुहरूको दृश्य प्रतिनिधित्वको रूपमा पनि कार्य गर्न सक्दछ। गुगलको ज्ञान ग्राफ, तथापि, शीर्षकहरूको बारेमा कम दृश्य रेकर्ड हो।
हामीले बिच्छेदन गर्न खोज्नुपर्ने अन्तिम बुँदा शब्दावली नै हो। सामान्यतया, एक कुञ्जी शव्द ज्ञान ग्राफ संस्था वा शीर्षकहरूको हुन्छ। स्पष्टताको लागि, हामीले यो पत्ता लगायौं कि गुगलले "शीर्षकहरू" भन्ने शव्द प्रयोग गर्न रुचाउँदछ जुन उनीहरूले सार्वजनिक कागजातमा निरन्तर प्रयोग गर्ने शब्द हो भनेर विचार गर्दछन्।
शीर्षक अधिक प्रयोगकर्ता-मैत्री हुन जान्छ, तर यसलाई बुझ्न गाह्रो पनि भयो जब गुगल शीर्षक वा निकायलाई जनाउँछ।
निकाय विषय प्रकारहरू
सामान्यतया, निकायलाई विषय प्रकार दिइन्छ। यो एक व्यक्ति हुन सक्छ; घटना; संगठन, स्थान, वा देश। यदि इकाई यी मध्ये कुनै पनि होइन भने यसलाई "कुरा" को रूपमा लेबल गरिन्छ। आशा छ, गुगलले नयाँ प्रविष्टि प्रकारहरू विकास गर्न जारी राख्नेछ ता कि हामी "चीजहरू" कम प्रयोग गर्दछौं। गुगल द्वारा प्रयोग गरिएको प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग एपीआईले महत्त्वपूर्ण सुरागहरू प्रदान गर्दछ जुन हामीलाई सोच्न प्रोम्प्ट गर्दछ कि यदि धेरै शीर्षक प्रकारहरू वास्तवमा प्रयोग भइरहेको छ भने। यद्यपि त्यहाँ धेरै अन्य इकाई प्रकारहरू छन् जुन गुगलको नलेज ग्राफ खोजी एपीआई विकासकर्ता पृष्ठमा फेला पर्‍यो। हाल गुगलले सूचीकृत भए झैं धेरै संस्थालाई वर्गीकरण गर्न असमर्थ देखिन्छ। हामी आशा गर्दछौं कि समय बित्दै जाँदा यो पनि परिवर्तन हुनेछ।
यसबाहेक, केवल २०% संस्थाहरू गुगल द्वारा प्रकृति प्रयोग गरिएको प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग एल्गोरिथ्मले मान्यता दिए जब तिनीहरूको सार्वजनिक प्रस्तावको तुलनामा।
ज्ञान ग्राफ को फाइदा
विश्वको जानकारी शीर्षकमा संगठित गरेर, यो क्रल गर्न र सजिलो हुन्छ वेबपृष्ठहरू र वेबसाइटहरू जसले खोज ईन्जिन प्रयोग गर्दछ। यसमा विविधता, स्केल, अखण्डता, र गति समावेश छ।
इन्टर्नेटमा वेब पृष्ठको संख्या एक धेरै छलफलयोग्य विषय हो। जबकि कोहीले तिनीहरू अनगिन्ती तर्क गर्न सक्छन्, वेब पृष्ठहरूको संख्या ट्रिलियानमा धेरै जसो खस्कन्छ, र यो संख्या दैनिक विशाल दरहरूमा विस्तार भइरहन्छ। यसको विपरित, हामी मानिसहरूले बुझ्ने शीर्षकहरूको संख्या एकदम कम छ, र संख्या निकै कम दरमा बढ्दैछ।
यो समान इन्टरनेटमा नक्कल इन्टर्नेटमा भेट्टाउने थुप्रै सामग्रीहरूमा साझा गरेको समान विचारहरूको संकेत गर्दछ। अर्ध-संरचित प्रणाली प्रयोग गरेर शीर्षकको विवरण क्रमबद्ध गरेर, इन्टरनेटमा समावेश जानकारीले सानो ठाउँ लिन सक्छ र यति धेरै डुप्लिकेट हुने छैन।
फरक डाटा स्रोत भएको फाइदाहरू
एक शीर्षकको बारेमा जानकारी भण्डारण गरेर, बहु डाटा स्रोतहरू उद्धृत गर्दै बाटो सजिलो हुन्छ र तपाईंले उपभोक्ताहरूलाई फेरि समान वेबपृष्ठमा फेरि पठाउनुपर्दैन। यसले हामीलाई बताउँछ कि गुगलले शीर्षकहरूको बारेमा विस्तृत विवरणहरू स collect्कलन गर्न र गर्न सकीन्छ र तिनीहरूलाई स्क्रीन वा केही अन्य माध्यमहरूको समूह प्रयोग गरी प्रदर्शन गर्दछ तर प्रयोगकर्ताको प्रश्न वा प्रयोगकर्ताको लागि सुधारिएको तरीकामा।
सिद्धान्तमा, शीर्षकको बारेमा जानकारी कहिलेकाँही इन्टरनेट बाहिरका स्रोतहरूबाट निकाल्न सकिन्छ।
जानकारी अखण्डता लाभ
जबकि Google ज्ञान ग्राफ कहिलेकाँही त्रुटिहरू र तथ्यात्मक अशुद्धताहरू समावेश गर्न परिचित छ, यो कहिलेकाँही खराब अभिनेता वा एसईओ पेशेवरहरू द्वारा हेरफेर गरिन्छ। यस दृष्टिकोणको तथापि, गुगललाई सत्यको एकल बिन्दु प्रदान गर्ने फाइदा छ। जे होस्, यो विवादास्पद विषयहरूको लागि मामला नहुन सक्छ।
कुनै पनि विषयको बारेमा नयाँ तथ्य गुगलको ज्ञान ग्राफमा थप्न सक्नु अघि धेरै प्रमाणीकरण प्रक्रियाहरू पार गर्नु आवश्यक पर्दछ। तर यस्तो सम्भावना छैन कि गुगलले खुल्ला रूपमा यी थ्रेसहोल्डहरूमा छलफल गर्नेछ।
नकारात्मक पक्षमा, सत्यको एक विन्दु पूर्वाग्रह गर्न वा जानकारीको विविधता कम गर्न सक्छ यदि डाटा स्रोतहरू आफैंमा पहिले नै मिलावटी छ भने।
जानकारी पुनःप्राप्ति लाभ
उनीहरूका शीर्षकहरू मार्फत जानकारी क्रमबद्ध गर्न धन्यबाद, जानकारी पुन: प्राप्त गर्ने दुबै छिटो भएको छ Google र प्रयोगकर्ताहरूद्वारा जुन वेब पृष्ठहरूको एक हेयरस्टेकमा जानकारीको सियो खोज्दैछ।
गुगलको ज्ञान ग्राफ कहाँ प्रयोग गरिएको छ?
धेरै एन्ड्रोइड र स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको लागि, ज्ञान ग्राफ प्राय: उनीहरूको गृह स्क्रीनहरूमा "खोज" सुविधाको लागि प्रयोग गरिन्छ। गुगलले प्रयोगकर्ताको व्यवहारको बारेमा जानकारी प्रयोग गर्दछ कुन कुन विषयहरू तपाईको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भनेर बुझ्नको लागि, र ती प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको प्रयोग ईतिहासको आधारमा ती सम्बन्धित शीर्षकहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
गुगल प्रवृत्ति पनि अर्को स्थान हो जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले रोचक शीर्षकहरू फेला पार्न सक्दछन्। त्यस बिन्दुबाट, गुगलले एक संकेत दिन सक्दछ जुन विषयहरू एक अर्कासँग नजिकबाट सम्बन्धित छन्। यद्यपि, हालका प्रमाणहरूले सुझाव दिन्छ कि यो डाटा हाल समान प्रयोगकर्ताद्वारा अन्य खोजहरू तान्ने गरी जम्मा गरिएको छ, जसले अप्रत्याशित सम्बन्धित विषयहरूमा पप अप गर्न सक्दछ।
प्यानलको रूपमा, जब प्रयोगकर्ताले खोजी क्वेरीमा टाइप गर्दछ जुन ज्ञान ग्राफ प्रयोग गरेर जवाफ दिन सकिन्छ, तपाईं शीर्ष-गुणवत्ता खोजी परिणामहरू पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रायः, यी परिणामहरूले मुख्य खोजी परिणामहरूलाई ओझेलमा पार्छ, जुन वेबसाइटको पितालाई लिंकमा धकेल्दछ।
यी उत्तरहरू यो तरिकाले पनि प्रदर्शित हुन्छ जुन गुगलले भ्वाइस खोजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि उत्तरहरू प्रदान गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ।
शिर्षक खोजमा शीर्षकहरू अत्यधिक देखिन्छन्, त्यसैले तपाईं सम्बन्धित ठाउँ वा व्यक्तिको तस्वीर प्रयोग गरेर खोजीबाट सम्बन्धित जानकारी फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
यो ज्ञानको ग्राफ वेबपृष्ठहरू बाहेक अन्य डेटा स्रोतहरूको भण्डारहरूको रूपमा प्रयोग हुने विधिहरूको उत्कृष्ट उदाहरण हो।